August | 2008 | MYANMAR POLITICAL NEWS, ART AND IDEA
>POEM FOR THE MIND GAME 1 August 30, 2008
Filed under: OTHERS' POEMS — Nyo Gyi @ 1:24 pm
ရှုံးနိမ့်မှု မှ အလင်းရှိရာဆီ
ငါ အရောက်သွားမယ် ။ ။
(ကမ္ဘာ့ကဗျာနေ့ WORLD POEM DAY – March, 21. 2008 ကဗျာစာအုပ် (ပခုက္ကူ)မှ ကူးယူဖော်ပြသည်)
(လက်သီးပုံ – http://mattaronson.wordpress.com/)
POEM FOR THE MIND GAME 1
>Sitagu Sayadaw U Nyannissara is preaching in Mandalay for Nargis Fund August 29, 2008
Filed under: MY NEWS,NARGIS CYCLONE,PHOTOS,SITAGU SAYADAW — Nyo Gyi @ 7:38 am
သီတဂူဆရာတော်ဘုရားကြီး အရှင်ဥာဏိဿရသည် ၀ါတွင်းကာလ အခါသမယအတောအတွင်း မန္တလေးမြို့၊ မြင်းခြံမြို့များ၌ နာဂစ်လေဘေးကူညီရေး ရန်ပုံငွေအတွက် အလှူခံတရားပွဲများ ဟောကြားပြီး ရန်ပုံငွေရှာဖွေလျက်ရှိနေပါသည်။
ဆရာတော်ဘုရားကြီးသည် နာဂစ်မုန်တိုင်းက ဧရာဝတီတိုင်းနှင့် အခြားအောက်ဗမာပြည်နေရာများကို ၀င်မွှေအပြီး မေလ (၈)ရက်မှ စတင်ကာ နာဂစ်လေဘေးသင့်ဒေသများအတွက် ကယ်ဆယ်ရေး၊ ပြန်လည်ထူထောင်ရေးလုပ်ငန်းများကို ယနေ့အချိန်အထိ စွမ်းစွမ်းတမံ ဆောင်ရွက်လျက်ရှိနေပါသည်။
ယခုအခါ ဆရာတော်ဘုရားကြီးသည် မန္တလေးမြို့၊ မြင်းခြံမြို့များတွင် ညစဉ်ဆက်တိုက်ဆိုသလို တရားပွဲများ ကျင်းပပြီး နာဂစ်ရန်ပုံငွေအတွက် အလှူငွေ၊ ပစ္စည်းများ ဆက်လက်အလှူခံလျက်ရှိပါသည်။
မန္တလေးမြို့ပေါ်က အရှင်ဥာဏိဿရ၏ တရားပွဲတစ်ခု (သြဂုတ်၊ ၀၀၈)
Sitagu Sayadaw U Nyannissara is preaching in Mandalay for Nargis Fund
>Samak Sundaravej, We are very sorry. August 28, 2008
Filed under: DAW AUNG SAN SU KYI,OTHERS' NEWS,PHOTOS — Nyo Gyi @ 12:30 pm